Fametavetana ara-nofo - mpitsikera, mahafantatra ny soritr'aretina sy ny fihetsika fanampiny
Fanararaotana ara-nofo - Fiarovana sy soritr'aretina | fampianarana
Fanaintainana sy valisoa - mifanakaloza hevitra momba ny fomba fandikan'ny ankizy amin'ny ankizy
Ahoana no iarovan'ny ankizy amin'ny fanafihana ara-nofo amin'ny Internet?
Ny fiarovana ny aterineto
Aiza ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy sy ny tanora?
Saina ho an'ny fanararaotana ara-nofo
Inona no tokony hataonao raha manararaotra ny zanakao?
Inona no tokony hatao raha misy ahiahy?
Ny ray aman-dreny dia maniry ny hiaro ny zanany araka izay azo atao amin'ny herisetra sy ny fanararaotana ara-nofo. Saingy rahoviana no afaka hiresaka momba ity lohahevitra ity amin'ny ankizy rehetra? Ary inona marina no mampitandrina ny zanany manokana? Ilaina ve ny manambara ny tsipiriany rehetra na misy fitsipika vitsivitsy vitsivitsy hiarovana ny zaza amin'ny fanafihana ara-nofo? Raha ny fahitana fa matetika ireo mpandika lalàna no tompon 'andraikitra dia mbola sarotra kokoa ny lohahevitra momba ny fanararaotana hanao firaisana ara-nofo ary tokony hiatrehana ny fahatsapana lalina indrindra. Zava-dehibe ny mampita amin'ny ankizy fa amin'ny olana rehetra ary ny tahotra rehetra dia tonga hatrany amin'ny ray aman-dreny.
Fanararaotana ara-nofo - fiarovana amin'ny alàlan'ny fahatokisan-tena
Ny ankizy manokan-tena dia tsy dia atahorana loatra ny fanararaotana ara-nofo. Mihen-danja ny fisian'ny fanakatsakanana ho an'ny mpanao fandikan-dalàna eto, satria matahotra izy fa hiaro ny tenany ny ankizy na hiantso ny fanararaotana any an-trano. Zava-dehibe àry ny hanomezana ny zanakao ny endriny tsara indrindra ary ny hikarakara ny filany ara-batana sy hanaja azy ireo. Izany dia manomboka amin'ny oroka omena ny dadatoany, izay nolavin'ilay zaza. Tsy voakitika na voarohirohy na oviana na oviana ilay zaza.
Atsaharo ny fanararaotana ankizy
A "Tsy hoe ratsy, mitarika ny tenanao miaraka, raha tsy izany dia tafintohina, rahalahin-drain'i" dia fandriana izay voa germinates ny nanafintohina azy amin'ny ho avy. Satria na dia afaka mampiasa teny filamatra toy izany aza izy mba handefasana zaza amin'ny zavatra tsy tadiaviny. Ny zavatra tian'ny ankizy iray ary inona no tsy, mamaritra azy io. Mila herimpo ihany koa ny filazana fa tsy te hikasika ny nenitoan'ny olona iray. Noho izany dia mila fahatokisan-tena sy fahatsapana ho afaka hiatrika ny vatany ny ankizy.
Raha saro-kenatra sy voatahiry ny zanakao, dia afaka manatsara ny fahatokisan-tena amin'ny fianarana manokana koa ianao. Saika ny tanàn-dehibe rehetra dia manana izany ary ny fiarovan-tena ho an'ny ankizy madinika dia atolotry ny fikambanana sasany. Tsy ny milaza izany, fa ny zaza akanin-jaza afaka hiaro ny tenany amin'ny fomba mahomby olon-dehibe iray hiaro, fa ny fahalalana izay mahazo ny zaza ao amin'ny Mazava ho azy fa toy izany no mahatonga azy kokoa matoky tena sy be herim-po - ary mitondra azy io izao no avy tao an-niharam-boina anjara asany.
Arovy ny fisokafana sy ny fanabeazana!
Ny fifandraisana tsara amin'ny zanakao dia ny alpha sy omega ny fananana ny zanakao hamboraka aminao rehefa mila izany. Tokony hanazava ny zanakao amin'ny resaka firaisana ara-nofo, misokatra ary tsy menatra. Efa ela ny tantaran'ireo tantely sy voninkazo kely.
Ny zaza dia tsy afaka manonona izay fantany. Koa aoka ho misokatra araka izay azo atao, omeo ny anarana rehetra ny ampahany amin'ny vatanao ary aza matahotra ny hamaly am-po ny fanontanian'ny zanakao.
Raha manontany ny zanakao - ary hanontany izany, satria ny ankizy rehetra amin'ny taona iray no liana! - Aiza avy ireo zaza vao teraka dia lazao azy fa tsy mifanaraka amin'ny fepetra araka izay azo atao ary avelany hivoaka ny vagao. Misy boky mahagaga sy bokikely mahatalanjona ankehitriny izay manampy ny ray aman-dreny hiatrika ny firaisana ara-nofo tsy misy fikolokoloana.
Tokony ho fantatry ny ankizy ny atao hoe fanararaotana ara-nofo. Hazavao amin'ny ankizy araka izay azo atao ny ankizy ary tsy atahorana ny hisian'ny fanararaotana ara-nofo hatrany. Mazava ho azy fa fitetezana goavana eo anelanelan'ny fampitandremana sy ny ahiahy.
Noho izany dia zava-dehibe ny ilazanao amin'ny zanakao hoe: misy izany, saingy tsy mahagaga izany. Saingy raha mitranga izany dia tsy maintsy miresaka momba izany ianao. Ny fomba amam-panao mahazatra indrindra dia ny mampangina ny zaza. Hanao fandrahonana izy na hiezaka hamono ilay zaza. Na manao fampanantenana sy valisoa amin'ny zaza izy noho ny fahanginany. Tokony ho fantatry ny zanakao koa izany. Ireo izay mahafantatra ireo fomba ireo dia hahita fa mora kokoa ny mamantatra hoe oviana no manomboka ny fanararaotana ara-nofo ary afaka miaro tena amin'izany.
Satria matetika ny fanararaotana ara-piraisana no manomboka mandondòna, fa tsy amin'ny iray segondra. Ny mpihatsarambelatsihy dia mamindra ny làlan-kalehany ary maherin'ny mihoatra ny sisintany. Koa amporisiho ny zanakao hiresaka avy hatrany momba izay zavatra tsy mahazo aina aminy, na dia misy loza aza. Tokony ho fantany fa azo atao ihany ny miaro azy raha miresaka izany.
Ankoatra ny fikajiana madinika, ny aterineto koa dia manolotra sehatra vaovao ho an'ny mpanao heloka bevava. Ity efitrano ity dia tokony heverina ho toy izany avy amin'ny ray aman-dreny.
Fiarovana amin'ny fanorisorenana ara-nofo amin'ny Internet
Famelabelaran-kevitra: Ny Internet dia tena mifanaraka amin'ny tokony ho izy tsy hajaina, satria manana zavatra vonona izy, ary ny tena fiainana tsy afaka manao: tsy misy anarana sy tsy misy vavolombelona. Noho izany, indrindra io sehatra vaovao momba ny heloka bevava io dia malaza be.
Indrisy fa ireo ankizy, izay tsy dia mahazatra loatra amin'ny fitsipika ao amin'ity tontolo vaovao ity, no tena mijaly. Soa ihany fa misy fitsipika vitsivitsy vitsivitsy ahafahana mamela ny tanora hiditra ao amin'ny tontolon'ny aterineto.
Ny tsy fitoniana ireo nanao ratsy manoloana ny fisokafana ireo niharam-boina
Ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka mahita mora sary, adiresy mailaka, nomeraon-telefaona ary adiresy ny aterineto. Satria matetika ny ankizy sy ny tanora no mampiditra ampahibemaso azy ireo amin'ny pejy fanta-daza, dia kilalao ho an'ny ankizy izany ary noho izany ny fahalalana irery dia tsy azo sazina. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ireo mpampiasa dia mampiasa io vaovao io mba hifandraisana amin'ireo niharam-pahavoazana, matetika no mahatonga azy ireo ho tanora kokoa noho ny azy, ary mamitaka ny tombontsoan'ny besinimaro. Indraindray dia sehatra fifanakalozan-dresaka na sehatra ho an'ny daholobe ihany koa, ka ny fifandraisana voalohany no atao. Ao ireo forum, tanora miara-mamory tombontsoa iombonana (ohatra ny vavahadin-tserasera, izay tanora dia afaka nanangana ny tantarany manokana, izay avy eo laharana), ka dia ny fifandraisana eo amin'ny fialam-boly mahazatra kokoa inconspicuous. Matetika mampiasa ny nahavanon-doza sandoka mombamomba azy, izany hoe mifanaraka ny angon-drakitra (daty nahaterahana, toeram-ponenana, ny fampianarana) Hitantsika teo aloha fa tsy zava-misy marina.
Ny olana ihany koa dia maro ny ankizy sy ny tanora no mahatsiaro voaro ao amin'ny rindriny efatra. Ny tontolo anaty aterineto dia virtoaly, noho izany dia toa virjiny ihany koa ny loza ary tsy hahita ny lalana mankany amin'ny zava-misy. Saingy oviana no nanomboka ny fanararaotana ara-nofo? Tsy tonga hatrany amin'ny fihaonana amin'ny mpandika lalàna hiresaka momba ny fanararaotana ara-nofo. Alefaso nahavanon-doza ny sasany niharam-boina sary amin'ny firaisana ara-nofo antony manosika na filma amin'ny firaisana ara-nofo afa-po - izay mihitsy ny heloka bevava satria afaka ny zaza, ny tanora sy ny tanora fanahy, dia manahiran-tsaina sy mahatahotra. Ireo mailaka maimaim-poana na fangatahana handefa sary ihany koa dia heloka bevava.
Ny fanorisorenana ara-nofo eo amin'ny toeram-piasana dia tsy fahatapahana tsy misy dikany
Ny onjampeo tonga lafatra ho fiarovana amin'ny surf - Tips for Kids
Ny laharam-pahamehana ambony dia tsy misy anarana. Aza mamoaka ny adiresinao na ny nomeraon-telefaona amin'ny aterineto. Aza alefa any amin'ny olon-tsy fantatra ny angona rakitrao, avelao ny antonta-peo na ny sarin'ny fianakaviana. Raha mampiasa solonanarana ianao, dia tsy tokony hampiditra ny tena anaranao na hampiseho ny taonanao, toy ny Lisa99. Avy amin'izany dia afaka manatsoaka hevitra fa i Lisa dia teraka tamin'ny taona xxxx. Mampiasà tarehimarika sy anarana. Ao amin'ny tranonkala toy ny Facebook, dia matetika ianao no mahamarika raha tsy maka ny sarinao manokana ianao. Ataovy azo antoka fa ny sary dia tsy fanasana ho an'ny mpamono olona.
Ny tena zava-misy amin'ny habaka virtoaly. Ny habaka dia toerana, sehatra tsy misy sisintany ary manana fahafahana tsy voafetra. Mikorontan-tsaina ny zava-drehetra eto: avy amin'ilay namanao mahafinaritra eo amin'ny mpanao heloka bevava madinika mankany amin'ny banky mpangalatra sy ny ankizy maditra. Matetika ireo mpanao heloka bevava no manao akanjo marevaka indrindra. Aoka ho fantatrao fa tsy misy namana iray ao ambadiky ny fifandraisana tsara.
Raha misy zavatra mahatsikaiky, dia resaho amin'ny ray aman-dreninao izany. Aza mety halaim-panahy hanao zavatra tsy tianao ianao. Ny sary sy ny nomeraon-telefaona manokana ary ny fanendrena dia tsy eo an-tanan'ireo olon-tsy fantatra.
Fantaro fa misy olona miafina miafina ao ambadiky ny tontolon'ny virtoaly. Tsy ny olon-drehetra no namana - ary na i MickeyMouse17 aza dia ilay lehilahy mamy miaraka amin'ny feony tsara indrindra lazainy fa mety.
Tsy misy fivoriana amin'ny namana Internet. Aza mihaona amin'ny namana iray fantatrao amin'ny Internet fotsiny. Eto dia misy ny loza lehibe indrindra. Aza mamaly ny fanasana an'io karazana io! Mifanohitra amin'izany: Raha mahatsikaiky ianao dia tokony hitatitra avy hatrany io profil io amin'ny mpandrindra ny forum. Tahaka izany ihany koa ny tranga iray rehefa misy olona mifamatotra amin'ny votoatin'ny firaisana ara-nofo, na ny horonan-tsary, ny sary na ny lahatsoratra misy soso-kevitra mety. Ny mpikarakara ilay tranonkala dia afaka manokatra avy hatrany ny polisy.
Izay mino fa ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy sy ny zatovo dia manomboka raha toa ka misy endrika fihetsika ara-pananahana no diso. Saingy aiza marina no manomboka ny fanararaotana ara-nofo na ny fanorisorenana ara-nofo? Mazava ho azy fa tsy azonao mazava tsara izany. Na izany aza, ny zavatra rehetra manitsakitsaka ny fahamendrehana sy ny sitrapon'ny ankizy dia mazava ho azy fa heloka bevava.
Fiarovana amin'ny fanararaotana ny ankizy
Amin'ny alalan'io famaritana io, mety ho tsara mihitsy izany na fanamarihana vetaveta. Ny fiarahamonintsika dia mahatsiaro saina momba io olana io, izay tena tsara amin'ny lafiny iray, ary ireo rehetra izay miasa ao amin'ny rafi-pampianarana dia mifantoka. Saingy mitarika ihany koa ny hoe ny ankamaroan'ny raim-pianakaviana dia miharatsy kokoa ny zanany, ka tsy manao ratsy.
Fanararaotana ara-nofo amin'ny fisehoany
Ny voalohany dia ny fanorisorenana. Ao amin'ny efitrano fifanakalozan-dresaka na seho an-tserasera dia mandefa horonan-tsary na sary miaraka amin'ny votoaty vetaveta ny ankizy na tanora. Indraindray dia angatahana ihany koa izy ireo hanao ny fanaovana firaisana ara-nofo, indrindra amin'ny Skype, noho izany dia afaka mandinika azy ireo ny fandikan-dalàna. Ny endri-panerena hafa dia ahitana antso an-tariby na famerenana fanehoan-kevitra sy votoatiny mazava.
Ny dingana manaraka dia mikasika ny zaza. Ny mpamono dia mangataka ny hanohina ny zaza ao an-toerana, manohina azy, na mamporisika azy hikasika ny tenany ary avelany hahita azy. Ny fihenoana dia mety mitarika fanolanana sy / na hampiditra ireo fomba fanao ara-nofo hafa. Mazava ho azy fa ny pôrnôgrafia amin'ny ankizy koa dia ampahany amin'ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy sy ny tanora. Eto dia voatery nanosotra sy horonantsary ny ankizy ary naka sary. Indraindray dia voatery mijery sary sy filma na sary vetaveta na mijery ny fomba fanaon'ny hafa. Ny endriky ny fanararaotana ara-piraisana dia mitovy amin'ny fomba fijerin'ny mpandàla fahatsapana!
Fa maninona no zara raha hita?
Ny fihenan'ny fanararaotana ara-nofo dia manjavozavo. Izany dia vokatry ny hoe matetika ireo mpampihatra dia avy amin'ny tontolo iainan'ilay zaza. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, indrisy fa ny mpianakavy, izay manararaotra ny fahefany amin'ny zaza. Ny zaza dia mifandray amin'ny fiankinana, ara-tsaina ary ara-batana, ary tsy afaka manohitra ny fametavetana ara-nofo mandritra ny fotoana maharitra. Na dia manapa-kevitra ny hiresaka amin'ny olon-dehibe hafa ao amin'ny fianakaviana aza izy, dia matetika no tsy mitondra any amin'ny polisy. Ny zava-misy, ny ankizy akaiky kokoa dia ho an'ny mpanao heloka bevava, ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao dia alefa any amin'ny fitsarana. Ny zava-misy dia ny ankamaroan'ny tovovavy no iharan'ny heloka bevava. Matetika dia avy amin'ny tontolo iainana na ny manodidina ny olom-pantatra ny tompon-tany.
Satria matetika no mangina mandritra ny fotoana maharitra ireo niharam-pahavoazana, sarotra be ny mahita ny fanararaotana ara-nofo. Matetika izy no manaiky fa efa tara loatra ka efa nisy ny soritr'aretina ara-tsaina na ara-batana. Misy marika maromaro izay mety hanondro ny fanararaotana ara-nofo, fa tsy voatery hanondro izany.
Inona avy ireo mari-pamantarana ara-piraisana ara-nofo?
Indrindra amin'ity lohahevitra ity, maro no matahotra ny maneho ny ahiahiny, satria mazava ho azy fa ny fiampangana diso iray dia matetika miady amin'ny fiampangàna matetika ary matetika tsy voavonjy mihitsy. Na dia izany aza dia mety ho ny tombotsoan'ny niharam-boina ihany no hanehoany ny ahiahiny mihoatra noho ny tsy firaharahiana ny fanararaotana ary ny fahavoazana mandritra ny taona maro.
Ny fiovana eo amin'ny fihetsika dia mampiahiahy!
Ny fiovana eo amin'ny fihetsika dia matetika no famantarana voalohany amin'ny fanararaotana ara-nofo. Tsy midika izany fa mifototra amin'ny fanararaotana ara-nofo ny fanitsakitsahana ny fitondran-tena. Toy izany koa, ny hatezerana miaraka amin'ny namana, ny fidirana an-tsekoly na ny fahaverezan'ny olona akaiky dia mety hiteraka fiovan'ny fihetsiketsehana. Ankoatra izany, ny dingana sasantsasany amin'ny fianarana sy ny dingana fampivoarana dia matetika ny antony mahatonga ny fihetsika tsy ara-dalàna amin'ny fitondran-tena.
Ny fijerena mazava tsara dia manome fampahalalana, saingy tsy tokony hohadinoina fa ny ankizy tsirairay dia mitantana ny fampijaliana araka ny toetra, ny taona, ny mpanao heloka bevava ary ny lalàm-panorenana. Zava-dehibe: Miharihary kokoa ny fahamendrehana, vao mainka mihamafy ilay ahiahy!
Famerenam-batana eo amin'ny fomba fitondrantena vao haingana
Ny marika maromaro dia tena mampiahiahy ary tokony hampandre ny ray aman-dreny. Anisan'izany indrindra amin'ny zazakely: matory aretina ka nitombo fisehoan-javatra ny nofy ratsy, bedwetting na ny tsinay hetsika taorian'ny maharitra Saubersein, vaovao tahotra na phobias amin'ny ankapobeny, whiny fitondran-tena, ny fihemoran'ny ny jaza fitondran-tena fa ny zaza dia tena nisy voatahiry (ohatra, mitsetsitra ankihibe, zazakely lahateny) fitomboan'ny mila fiarovana, fahaverezan'ny komana na ny fanirianareo, ny tsy fahampian'ny fifandraisana, ny tahotra ny fiaraha-monina fifandraisana, mihemotra ho izao tontolo izao ny ny azy, mampiavaka liana amin'ny vatana hafa ny ankizy sy ny olon-dehibe, hita ao manokana endrika ihany koa ny hita ao anatin'ny ny lalao (firaisana ara-nofo asa matetika nanitsy tao amin'ny lalao na ny lohahevitra ny lalao), ny fahaverezan'ny fahalianana amin'ny zavatra tsara tarehy koa.
Ao amin'ny ankizy zokiny, matetika dia misy ny tsy fetezana hafa azo avy amin'ny fampiasana zava-mahadomelina, ny heloka bevava, ny fahaketrahana, ny eritreritra mamono tena, ny fihinanana sakafo, ary ny fihenan'ny fahombiazan'ny sekoly. Matetika ny tanora toy izany koa dia mampiseho fihetsika mahavariana amin'ny firaisana.
Ny soritr'aretina ara-batana amin'ny fanararaotana ara-nofo
Ankoatra ireo fiovan'ny fitondran-tena voalaza etsy ambony dia matetika misy soritr'aretina ara-batana, izay matetika no tsy manome porofo ampy momba ny fanararaotana ara-nofo. Matetika izy ireo no lasa miahiahy raha ny amin'ny tsy fetezana ara-tsaina ihany. Kibo fanaintainana, vavony fanaintainana, fanorotoroana, ra ao amin'ny fisotrony (fa tatavia aretina) na ny tsinay hetsika (by lava-pitombenana fistulas) Mety ho mampihorohoro sy ny maro hafa tsy dia mampidi-doza na amin'ny zavaboary, fa famantarana matetika ny fanararaotana ara-nofo. Sehatra ahitana fanaintainana eo amin'ny fivavia-, matetika mangidihidy, kibo ratra, aretina azo avy amin'ny firaisana ny vohoka tsy niriana.
Ny fanararaotana ara-nofo dia aseho rehefa manaporofo amin'ny olon-dehibe ny ankizy iray, na rehefa misy soritr'aretina mibaribary dia miahiahy sy manomboka manadihady.
Matetika ny tsy fahampiana dia manenjika ny fahatafintohinana! Ahoana izao? Ahoana no handehanako hiaro ny zanako sy hanasazy ny tompon-trosa? Raha toa ka mirona mafy mikasika ilay foto-kevitra ilay zaza, dia matetika izy no manova izany na manao izany amin'ny sombina. Misy soritr'aretina maromaro izay manondro ny fanararaotana ara-nofo ary natao antsipiriany any an-kafa.
Zava-dehibe ny mitondra ilay zaza amim-pahamendrehana rehefa misy ny fanararaotana. Matetika ny ankizy no mieritreritra zavatra toy izany. Noho izany dia maka ny hevi-dalina rehetra izy ireo, na izany aza dia mety tsy ho azo amidy sy hafenina.
Fampahalalana mikasika ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy
Mba hanatsarana ny olana, matetika matetika ny ankizy no tsy manome valiny satria avy amin'ny tontolo eo no eo ilay tompon-tany, matetika avy amin'ny fianakaviany manokana! Izany matetika no fanelingelenana lehibe indrindra ho an'ny ankizy!
Mangataha tanjaka ary ampahatanjaho ny zaza!
Miezaha ho tony, na dia sarotra aza izany. Ny ankizy dia ao anatin'ny toe-javatra iray izay tsapany fa tsy mahatsiaro tena, misafotofoto ary matetika no meloka. Tsy mahagaga raha ny tenan'izy ireo no manome tsiny ny zaza.
Tena zava-dehibe ny hahazoana fanampiana matihanina haingana araka izay tratra. Afaka mampionona sy manatanjaka ary miaro sy mitaiza ny zanakao izy ireo, fa ny psikology sy ny manam-pahaizana ihany no ampiofanina mba hiatrehana ny fahasimbana ara-tsaina ateraky ny fanararaotana. Manampy ny ray aman-dreny hanatsara kokoa ny fanararaotana ara-piraisana ny zanany izy ireo, ary afaka manondro toe-javatra sarotra sy ny fomba hiatrehana izany.
Amin'ny maha ray aman-dreny azy, dia afaka manampy ilay zaza amin'ny alàlan'ny fahazarana iray izay mahazatra araka izay azo atao. Na dia toa tsy misy dikany aza ny habaka, dia manome fiarovana ihany koa ny fahazarana ary manampy ny ankizy handinika ny traikefa mampalahelo.
Indraindray izy io dia manomboka amin'ny ahiahiana kely izay tsy ho ela. Raha tsy miresaka momba ny fanararaotana ara-piraisana ny ankizy dia tsy tokony handrara azy amin'ny fanontaniana mivantana izany, satria raha tsy izany dia mety ho tanteraka ilay zaza.
Lazao amin'ny ankizy ny momba ny androny, ny antsipiriany amin'ny an-tsipiriany, ary ny mihaino tsara raha miresaka zava-mitranga mampalahelo izy. Ny sasany na oviana na oviana - tena na oviana na oviana - ny ankizy latsa amin'izay ny teny filamatra: "Tsy maintsy Fa mba efa be aloha hoe:" Na ratsy kokoa: "Nahoana no manaiky satria ny lavo" sy ny "tiako ao an-toerana ... "
Ny fanambarana toy izany dia mampirisika ny fahadisoan'ny zaza ary mbola mahatsapa ho ratsy kokoa aza izany avy eo. Sarotan-dreny be herim-po izy io, ary hiantsoana mihitsy aza ny fanararaotana. Raha efa tafavoaka tamin'ny fangejana voalohany ianao dia tokony hangataka fanampiana manokana ho anao, araka ny voalaza etsy ambony. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia misy ny polisy, satria fametavetana lehibe ny fanararaotana ankizy iray izay tsy maintsy hosaziana mba hiarovana ireo ankizy hafa avy amin'ity mpamono ity. Ny tokony hataon'ny polisy sy ny fotoana tokony hanaovana ny soa ho an'ny ankizy amin'ny fifampidinihana amin'ny psikology.
Fiarovana amin'ny masoandro ary ny vokany
Fikajiana voajanahary - fiarovana amin'ny masoandro
Fanampiana, mandainga ny zanako fampianarana
Fiatrehana fiarovana | fampianarana
Fanandramana miaraka amin'ny ankizy | Education ...
Ny fitiavana lehibe voalohany | fampianarana
Nahoana aho no te-hanan-janaka? fampianarana
Mijoroa ao am-pofon'ny ankizy | fampianarana